Moe Kai: MCQs နဲ. စာမေးပွဲများ
MCQs နဲ. စာမေးပွဲများ
ခုတလော အသိတယောက်ကို စာမေးပွဲအတွက် MCQs လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဝိုင်းလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ မအားတဲ့ အချိန်တွေကြားက ကြိုးကြိုးစားစား ကူညီရတာ ကျေးဇူးအတင်ခံရလာ မခံရလားတော့ မသိ။
တခြားသူတွေ MCQs ဖတ်ရင် ဘယ်လိုဖတ်တယ်ဆိုတာ မသိ။ ကျမရဲ အသိသူငယ်ချင်းကတော့ မေးခွန်းကိုဖတ် ထင်ရာတခုကို ခြစ်တော့ ရွေးတော့တာပါဘဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာက စာမေးပွဲအများစုမှာ MCQs တွေ ခြည်းပါ။ စာပုဒ်ရှည်ရေးခိုင်းတာ ရှားမှရှား။ ရေးရမယ်ဆိုရင် Thesis လို သုတေသန စာတန်းတင်ရတာမျိုးတွေ၊ ရှိထားပြီးသား သုတေသန စာစောင်တွေကို ပြန် review လုပ်ရတာမျိုးတွေ များပါတယ်။ ပြောမယ့်ပြောရတာ အဲဒီလို အရေးပျင်းလို. ရေးရမယ် ဘွဲ.လွန်မျိုး ကျမ မတက်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
ပြန်တွေးမိတော့ ကျမမှာ MCQs စာမေးပွဲကြောင့်တော့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အတော်ရှားပါတယ်။ အဲ ကျောင်းတုန်းကတော့ အထူးသဖြင့် 2nd M.B. မှာ မှားတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် Negative ကိုရထားပြီးသား တွေထဲက အမှတ် ပြန်နှုတ်ပစ်တော့ တော်တော် စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်။ လုံးဝမသေချာရင် မဖြေရဲခဲ့။ နောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီ Negative system ကြီးမရှိတော့ MCQs မှာ အမှတ်ကောင်းသွားတဲ့ သူနဲ. သိပ်မကောင်းတဲ့သူနဲ. ကွာသွားတာက ဘယ်သူ အမှန်းတော်သလဲပေ့ါ။
ကျမငယ်စဉ် ဆေးကျောင်းတုန်းက မှားခဲ့ဘူးတဲ့ အယူအဆလေးတခုလဲ ရှိပါတယ်။ MCQs တွေ ဖြေကြည့်တယ်ဆိုတာ Theory အားလုံးကို ပိုင်မှ ဖြေရမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆလေးပါ။ အဲဒီတော့ စာတွေ ဟိုလျှောက်ဖတ် ဒီလျှောက်ဖတ်။ စာကတော့ ဘယ်တော့မှ ပိုင်တယ်ရယ်မရှိ ဖတ်စရာတွေ ပိုတုိုးလာတာပဲရှိပါတယ်။ ဒီလိုနဲ. Tutorial ဖြေခါနီးတဲ့ အထိ MCQs တွေ မလေ့ကျင့်နိုင်ခဲ့။
နောက်မှ သင်္ခန်းစာရပြီး နောက်ဆို စာမေးပွဲရှိတိုင်း စာကို ပြောင်းပြန်ပဲ ဖတ်ပါတော့တယ်။ စာပိုင်တာ မပိုင်တာထား။ MCQs စာအုပ်ကို စလှန်ပြီး တပုဒ်ခြင်း ဖြေဖိုကြိုးစားပါတယ်။ ကိုယ်သိပ်မသိတဲ့ မေးခွန်းတွေ သိပ်မသေချာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စာအုပ်ထဲ သွားပြန်ရှာ ဖတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖတ်တော့ ဘယ်အချက်အလက်တွေက အရေးကြီးတယ်။ ဘယ်ဟာမျိုးတွေက စာမေးပွဲမေးနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာ ပိုသိနားလည်ရတာပါ။
လုံးဝမသိတဲ့ မေးခွန်းတွေကြုံလာရင်လဲ သေသေချာချာ မေးခွန်းကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် MCQs အများစုမှာ ရွေးစရာ ၅ခုထဲက ၃ခုလောက်က လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မဖြစ်နိုင်တာတွေ ဖယ်ထုတ်လိုက်တော့ အများအားဖြင့် ၂ခုထဲက ၁ခုရွေးရတာပါ။ အဲဒီတော့ 50% chance မှန်နိုင်တာလေ။
မှတ်မိနေတာ ကျမဒီမှာ Foundation Doctor (မြန်မာနိုင်ငံရဲ. House Officer နဲ. ပထမနှစ် လက်ထောက်ဆရာဝန် ဆိုပါတော့) အနေနဲ. အလုပ်စတော့ MRCP စာမေးပွဲကို ဆေးရုံက ပေးမဖြေခဲ့။ အဲဒီ အချိန်က Over qualify ဖြစ်မယ် လို. ယူဆလိုတဲ့။ ကျမကိုယ်တိုင်ကလဲ Medicine ပဲ လုပ်ချင်တာလားဆိုတာ မသေချာခဲ့။ အဲဒါနဲ. ဖြေလို.ရမယ့်အချိန်နာနီးတော့ အရမ်း ကြိုးစားတဲ့ သူငယ်ချင်းက စာမေးပွဲ ဖြေချင်တယ်။ စာဖတ်ဖော် လိုချင်တယ်။ အဲဒါနဲ. ကျမကို စာမေးပွဲကြေး အတင်းသွင်းခိုင်းပြီး အတင်း စာလိုက်ဖတ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက အလုပ်အင်တာဗျူးနဲ. ရှုပ်နေတော့ စာတကယ်ဖတ်နုိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ စာမေးပွဲက ၂ပတ်အလို။ သူငယ်ချင်းနဲ. လေ့ကျင့်ရတော့ ကျမတို. မေးခွန်းတခုတိုင်းကို ငြင်းကြ စာအုပ်ပြန်လှန်ကြည့်ကြနဲ. တော်တော် အထောက်အကူ ပြုခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက စာမေးပွဲ တခါကျထားပြီးသား၊ စာတွေ တော်တော် ဖတ်ထားပြီးသား ဆိုတော့ ကျမအတွက် အတော့်ကို အထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။ MRCP Part1 ကို ၂ပတ်နဲ. ဖတ်ပြီး အမှတ် ၈၀ကျာ်ရခဲ့တဲ့ အထိပါ။ (အမှတ်က % နဲ. ပြန်တွက်တာလား၊ ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ မမှတ်မိတော့)။
အဲ အပြောမစောနဲ.ဦး Part2ကျတော့ ခြေထောက်ကျိုးပြီး အိမ်မှာ စာမဖတ်ပဲ ရုပ်ရှင်တွေ ဒေါင်းလုပ် အကြည့်များသွားတာ၊ စာဖတ်ဖော်ကလဲ မရှိဆုိုတော့ ၅၂ မှတ်နဲ.လား အောင်တာ (အောင်မှတ်က ၅၁လား သေသေချာချာတော့ မမှတ်မိတော့။ မှတ်မိတာ အောင်မှတ်ထက် ၁မှတ်ပဲ များတယ် - ကံကောင်းလို. အဟမ်း)
ကဲ လေရှည်နေလိုမရတော့။ အလုပ်သွား လူနာတွေကို အနိုင်သွားကျင့်ရတော့မယ် ဆိုတော့ .....